ekhaya / Bible / YeVangeli kaMateyu / ch 25 Matthew
25:1 "Ngelo xesha ubukumkani bamazulu buya kufanekiswa neentombi ezilishumi, ngubani, ukuthatha izibane zazo, waya kumkhawulela umyeni nomtshakazi ngaphandle.
25:2 Ke ezintlanu kuzo zazizizidenge, kunye amahlanu zaye ziziingqondi.
25:3 Kuba ezintlanu ziziziyatha, yazizisa izibane zazo, akazange uthabathe ioli nabo.
25:4 kodwa ngokwenene, abo ngobulumko bazisa ioli, ku tsha, izibane.
25:5 Ekubeni umyeni yalibaziseka, bonke balala, baye belele.
25:6 Kodwa ke ezinzulwini zobusuku, ikhala waphuma: 'Khangela, umyeni ezifikayo. Phumani niye kumkhawulela. '
25:7 Ngoko zonke ezo ntombi wavuka, zalungisa izibane zazo.
25:8 Kodwa Zathi ke eziziziyatha kweziziingqondi, 'Siphe kwioyile yenu, ngokuba izibane zethu kucinywa. '
25:9 Eziziingqondi baphendula bathi, 'Hleze nokuba kungabikho inganeli kuthi kuwe, kuya kuba ngcono ukuba uye nabarhwebi kunye nizithengele. '
25:10 Ke kaloku, bakubon 'ukuba babesiya kuthenga kuyo, umkhwenyana kufika. Kwaye ngabo bezilungiselele ngubani wangena kunye naye emsithweni, waza waluvala ucango.
25:11 kodwa ngokwenene, e kanye ekupheleni, ezinyulu asaleleyo kufika, bathi, 'Nkosi, Nkosi, asivulele. '
25:12 Ke yena waphendula wathi, 'Inene ndithi kuni, Andikwazi.'
25:13 Ngoko ke kufuneka ube zivule, ngenxa yokuba ningayazi imini okanye ilixa.
25:14 Kuba kunjengomntu owathi esicacisa uhambo olude, wabiza abakhonzi bakhe, wayinikela kubo impahla yakhe.
25:15 Wathi omnye wamnika iitalente zantlanu, omnye zambini, kodwa omnye wamnika elinye, walowo wanikwa ngokwawakhe. kwaye ngokukhawuleza, yaqonda.
25:16 Ke naye lowo wamkela ngaphandle iitalente ezintlanu, waya, yaye wenza ukusetyenziswa kwezi, kwaye ndizuze esinye isihlanu.
25:17 yaye ngokufanayo, lowo wamkela ezimbini ndizuze esinye isibini.
25:18 Ke naye lowo wamkela yanye, phuma, wemba emhlabeni, kwaye wayifihla imali yenkosi yakhe.
25:19 kodwa ngokwenene, emva kwexesha elide, inkosi yabo bakhonzi wabuya, ibalelane nabo.
25:20 Ke kaloku, xa lowo wamkela iitalente ezintlanu wasondela, wazisa esinye isihlanu seetalente, bathi: 'Nkosi, nokubahlangula iitalente ezintlanu kum. Khangela, Mna anda ngayo ngomnye amahlanu. '
25:21 inkosi yakhe yathi kuye: 'Wenze kakuhle, mkhonzi ulungileyo, uthembekileyo. Ngenxa yokuba Ubuthembekile kwiinto ezimbalwa, Ndiza kukumisela phezu kwezinto ezininzi. Ngena wovuyo lwenkosi yakho. '
25:22 Ke nalowo wamkela iitalente ezimbini naye wasondela, wathi yena: 'Nkosi, nokubahlangula iitalente ezimbini kum. Khangela, Ndizuze esinye isibini. '
25:23 inkosi yakhe yathi kuye: 'Wenze kakuhle, mkhonzi ulungileyo, uthembekileyo. Ngenxa yokuba Ubuthembekile kwiinto ezimbalwa, Ndiza kukumisela phezu kwezinto ezininzi. Ngena wovuyo lwenkosi yakho. '
25:24 Ke naye lowo wamkela italente yanye, yokusondela, wathi: 'Nkosi, Ndiyazi ukuba ungumntu olukhuni. Wena uvuna apho ubungahlwayelanga khona, ndibuthe apho ndingelelanga khona,.
25:25 Kwaye, ukwesaba, Ndaya ndayiselela italente yakho ngomhlaba. Khangela, unayo into okwakho. '
25:26 Kodwa wathi kuye inkosi yakhe, ukuphendula: Mkhonzindini embi namavila! Ubusazi nje ukuba ndivuna apho ndingahlwayelanga khona, ndibuthe apho ndingelelanga khona,.
25:27 ngoko ke, ukuyifaka ebhankini imali yam kubananisi, ke ngoku, e ekufikeni kwam, ubuncinane Bendiya ndamkele oko kukokwam nenzala.
25:28 Kwaye, thatha italente leyo, niyinike lowo uneetalente ezilishumi.
25:29 Kuba wonke umntu onako, uya kunikwa, aze abe maninzi. Kodwa ongenako, kwanoko kubonakala ukuba, uya kuhluthwa kwanoko anako.
25:30 Sayiphosa ukuba umkhonzi ongancedi lutho, mkhupheleni ebumnyameni obungaphandle, khona apho kuya kubakho ukulila nokutshixiza kwamazinyo. '
25:31 Kodwa ke akufika uNyana woMntu uya kuba bafika ngokuphakama kwakhe, nazo zonke iingelosi zikunye naye, uya kwandula ke ahlale phezu kwesihlalo lobungangamsha bakhe.
25:32 Kwaye zonke iintlanga ziya kuhlanganiselwa ndawonye phambi kwakhe. Abahlule abanye kwabanye, kanye njengokuba umalusi ezahlula izimvu ezibhokhweni.
25:33 Kwaye ke isikhululo izimvu, kanjalo, ngasekunene kwakhe, kodwa iibhokhwe kwakhe ngasekhohlo.
25:34 Ke ukumkani uya kuthi kwabo baya kuba ngasekunene kwakhe: 'Yiza, nina nisikelelweyo nguBawo. Ilifa ubukumkani obalungiselwa nina kwasekusekweni kwehlabathi.
25:35 Kuba ndalamba, kwaye nandipha ukudla; Ndanxanwa, kwaye obundinikile ukuba asele; Ndandingowasemzini, kwaye nandingenisa endlwini;
25:36 ze, kwaye wawuzegquma kum; abagulayo, nandivelela; Kwenzeka ndisentolongweni, yaye weza kum. '
25:37 Ngoko ke nje ndoba ngomphendulayo, bathi: 'Nkosi, nini sakubona nini na ulambile, nokudla kwakho; womile, kwaye ikunike asele?
25:38 Xa ke thina wabona na ungowasemzini, kwaye kuthathwa kuwe? okanye ze, ndakugqubuthela?
25:39 Okanye Sakubona nini na ke usifa, okanye usentolongweni, seza kuwe?'
25:40 Kwaye ephendula, i ukumkani athi kuwo, 'Inene ndithi kuni, wenze njalo oku enye yezi, lo mncinane abazalwana bam, nenjenjalo nakum. '
25:41 Ke naye uya kuthi, kwabo baya kuba phezu ngasekhohlo kwakhe: 'Suka kum, nina esingelwe phantsi, niye emlilweni ongunaphakade, ebe ilungiselelwa uMtyholi neengelosi zakhe.
25:42 Kuba ndalamba, yaye akuzange undinike ukuba adle; Ndanxanwa, yaye akuzange undinike ukuba asele;
25:43 Ndandingowasemzini kwaye akazange kum; ze, yaye akuzange bodwa; ndandigula kwaye ndisentolongweni, yaye akuzange ukutyelela mna. '
25:44 Ngoko kumphendula, bathi: 'Nkosi, ngaba sakubona nini na ulambile, okanye unxaniwe, nokuba ngumphambukeli, okanye ze, okanye ugula, okanye usentolongweni, asakulungiselela kuwe?'
25:45 Emva koko phendula kubo ngokuthi: 'Inene ndithi kuni, nanini na ningenzanga njalo nakumnye waba bangabona bancinane, ngokuba anibanikanga nina njalo nakum. '
25:46 Baya kumka aba baye elubethweni olungunaphakade, kodwa nje uya kungena ebomini obungunaphakade. "